Wasiirka cusub ee difaaca Soomaaliya oo la hadlay dhalinta u dagaalanta Alshabaab – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Wasiirka cusub ee Gaashaandhigga Soomaaliya, Cabdiqaadir Sheekh Cali Diini ayaa ugu baaqay dhalinyarada u dagaalamaya Al-Shabaab in ay nabadda qaataan oo ay ka faa’iideestaan cafiskii uu Madaxweyne, Xasan Sheekh Maxamuud uu horey ugu jeediyay.
Wasiirka oo la hadlay warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa yiri “Waxaan dhalinyarada la qalday leeyahay haka qeyb qaateen dib u dhiska dalkooda, oo yeysan ka qeyb qaadan bur burinta dalka, markasta waxa ay haystaan fursadda uu horey Madaxweynuhu siiyay, waxaan kaloo ku guubaabineynaa inay ka waantoobaan dagaalka”.
Wasiirka Difaaca ee Soomaaliya ayaa ku booriyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inay labo jibaaraan u adeegidda bulshada, isla markaana ay ka hortagaan kuwa bulshada ku dhibaateynaya dareeska ciidanka, si loo xoojiyo wada shaqeynta ka dhexeyso shacabka iyo ciidamada oo aysan nooqn kuwa laga cararo.
Wasiirka cusub ee gaashaandhiga Soomaaliya, Jen. C/qaadir Sheekh Cali Diini ayaa horay usoo noqday taliyaha ciidamada xooga dalka Soomaaliya, wuxuuna ka qeybqaatay dagaalo badan oo Alshabaab looga saaray meelo ka mid ah Muqdisho iyo labada Shabeelle.